'बलिदानबाट अभिनयको जाँच पास भएँ,... :: अशेष अधिकारी :: Setopati
'बलिदानबाट अभिनयको जाँच पास भएँ, एसएलसी फेल हुनु जीवनकै सुखद क्षण रहेछ'
हरिवंश आचार्य काठमाडौं, चैत १०
हरिवशं हास्य कलाकारिताको एउटा त्यस्तो खम्बा हुन् जसको चर्चा बिना नेपालको हास्य कलाकारिताको ठूले खण्ड अपुरो हुन्छ। उनी हास्य कलाकारका रूपमा ज्यादा चर्चित रहे तर गम्भिर भूमिका र खलनायकी भूमिकामा पनि उत्तिकै सशक्त। उनी मदनकृष्ण श्रेष्ठसँग टिभी र रंगमञ्चमा ज्यादा रमाए। फिल्ममा कम देखिए। हरिवशं भन्छन्, 'त्यतिबेला हामी हिरोको गिन्तीमा पर्देनथियौं। हामी फिल्ममा हँसाउनका लागि जबरजस्ती पेस्ट गरिएका चरित्रमा सिमित थियौं, त्यसैले हामी टिमी र रंगमंञ्चमा ज्यादा रमायौं, नाम र दाम दुबै कमायौ।'
उनी करिब १७ वर्षपछि 'शत्रु गते'बाट ठूलो पर्दा फर्किदैछन्। यसै सन्दर्भमा सेतोपाटीका लागि हरिवशं आचार्यसँग अशेष अधिकारीले उनले अभिनय गरेका पात्र, तिनका चरित्र निर्माण प्रक्रिया र अभिनय यात्राको कुराकानी यस्तो थियो:
आफूले गरेर हेर्छु। जस्तो, मानिसहरूले प्रचण्डको नक्कल गर्छन। उहाँको 'मने' भन्ने थेगो भिन्न छ, बाबुराम भट्टराईको 'निश्चित रूपमा' भन्ने छ। त्यो उहाँहरूको 'टिपिकल' चीज हो। म नेताहरूको नक्कल गर्दिन। मैले त्यस्तो गरेको भनेको कृष्णप्रसाद भट्टराईको हो, 'नेपाल बन्द'को लागि। त्यो यूट्यूबमा हेर्नसक्नुहुन्छ। केहि मानिसहरूमा अरू भन्दा भिन्न केहि विशेष क्यारेक्टर हुन्छ। त्यस्तै क्यारेक्टरलाई 'वाच' गर्ने हो।
स्क्रिप्टलाई हेरेर कस्तो क्यारेक्टर गर्ने हो, पहिलो ध्यान त्यसमा हुन्छ किनकी स्क्रिप्ट अनुसारको पात्र हुन्छ नकी पात्र अनुसारको स्क्रिप्ट। त्यसैले पहिले स्क्रिप्टले माग्नुपर्यो, त्यसमा मिल्छ भने पात्रको खोजी गर्छु। जस्तो मैले 'कान्तिपुर' टेलिसिरियलमा निर्वाह गरेको 'वडा अध्यक्ष'को चरित्र पनि भएका व्यक्तिबाटै हुँदै बनाएको हूँ। त्यो मैले ओस्ताद भैरव बहादुर थापाको नक्कल गरेको हो। 'मनको बाँध' फिल्म हेर्नुभएको छ भने बुझिहाल्नुहुन्छ। 'वडा अध्यक्ष'को अभिनय त्यहीबाट लिएको हो। उहाँको आँखा त्यस्तै हो तर मैले 'वडा अध्यक्ष'को रोलका लागि लिएँ। त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ कति कुराहरू।
मलाई गरेकोमा सबैभन्दा मनपर्ने क्यारेक्टर 'बलिदान' फिल्मको 'अर्जुन' पात्र हो। किनभने त्यसमा म हाँस्यव्यङ्ग्यको छाप बोकिरहेको मान्छेले शतप्रतिशत 'ह्यूमर' भन्दा बाहेकको काम गरेको छु। त्यसले कमेडी गर्ने मान्छेले पनि त्यस्तो गर्नसक्छ भन्ने प्रभाव दर्शकमा छोडेको छ। त्यसमा मैले अभिनयको जाँच दिन पाएँ र पास पनि भएँ। दोस्रो नम्बरमा 'लक्ष्मी' भन्ने टेलिसिरयलमा गरेको भूमिका। त्यसमा मैले 'दयाराम' पात्रका रूपमा एक्स्टरिम भिलेनको काम गरेको छु। 'बलिदान'मा मैले सकारात्मक जाँच दिन पाएँ भने यसमा नकारात्मक 'जाँच' दिन पाएँ।
मलाई 'कान्तिपुर', 'लालपूर्जा', 'चिरञ्जिबी', 'वनपाले', 'हरिबहादुर'। यी चरित्र दर्शकले मनपराउनुभयो। दर्शकलाई जे मनपर्यो त्यो मनपराउनु मेरो लागि बाध्यता भो एक हिसाबले। त्यसैले मलाई यी पात्रहरू मनपर्छन्।
हास्य कलाकारितामा प्रख्यात मान्छेलाई 'बलिदान'को गम्भिर भूमिका कसरी आयो?
'बलिदान' फिल्म बनाउने टिमको चाहना फिल्ममा हिरो हुने व्यक्तिको सार्वजनिक चरित्र नबिग्रेको स्वच्छ होस् भन्ने रहेछ। रामेश श्रेष्ठ दाइहरू यो कुरामा अलि चनाखो हुनुभएको रहेछ। 'हामीहरूले 'बलिदान'मा हिरो बनाउँछौं अनि हाम्रो हिरोचाँहि बाहिर जे पायो त्यही गरेर हिड्यो भने त हाम्रो फिल्मको वजन जस्तो हुँदैन्', भन्ने उहाँहरूको सोचाइ रहेछ। त्यही भएर त्यस्तै हिरो खोजिरहनु भएको रहेछ। खोज्दाखोज्दा कहाँबाट मलाई खेलाउने भन्ने कुरा भएछ तर त्यो फिल्मको टिमको मान्छेले 'कहाँ त्यो 'ह्यूमर'को छाप भएको मान्छेले यस्तो गम्भिर क्रान्तिकारी भूमिका दिने', भनेर विरोध पनि भएछ तर, रामेश दाइले 'त्यसो भनेर हुँदैन्, उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको आँखा जून छ , त्यसले जे पनि अभिनय गर्न सक्छ', भनेर अडान लिनुभएछ। पछि तुलसी घिमिरे डाइरेक्टरसाबले 'अँ हो नि त। एकपटक टेस्ट गरूँ न त', भन्नुभएछ।
त्यस बेलामा मदन दाइ, मेरो अत्याधिक चर्चाको सुरूवात भइरहेको थियो। त्यो बेलामा राजनीतिकरूपमा पनि एकदमै स्थापित भएका थियौं, भलै हामी कुन दलका हौं खुलेको थिएन्। तर ४६ सालको अनि त्यो भन्दा अगाडीको आन्दोलनमा पनि हाम्रो भूमिका भएको कारणले गर्दा फिल्ममा हुँदा 'बलिदान'लाई प्लस हुन्छ भनेर हामीलाई छनौट गरियो।
अलि अलि जन्मजात नै आएको हुन्छ। जो मान्छेले पनि म गायक बन्छू भनेर २२ वर्षसम्म राग सिके पनि उसमा जन्मजात अलिकति आएको छ भने ऊ गायक बन्न सक्दैन्। मैले म हिसाबमा नम्बर वान हुन्छू भनेर भने पनि म सक्दिन 'नेचर'ले नै मलाई दिएको छैन्। म सक्दै सक्दिन्, मलाई सामान्य भाग हिसाब पनि आउँदैन्।
म ऐना अगाडी आफैलाई देखाउँछु अनि काम गर्ने टिमलाई देखाउँछु। जस्तो 'लालपूर्जा', 'वनपाले', '१५ गते' गते मा मदन दाइ र म नै निर्देशक हो। मदनदाईलाई म यो पात्र गर्दैछु भनेर सेयर गर्छु । स्क्रिप्ट लेख्दा लेख्दै नै मैले कुन गर्ने मदन दाइले कुन गर्ने छुट्टिसकेको हुन्छ तर भन्या हुँदैन्। मदन दाइले पनि लेख्दा लेख्दै यो गर्ने थाहा पाइसक्नुहुन्छ र म पनि मैले गर्ने भूमिका थाहा पाइसक्छु। त्यसैले स्क्रिप्ट तयार गर्दै स्क्रिप्टसँगै हामी आफ्नो पात्रमा डुबिसकेका हुन्छौं।
सुरूमा मैले पद्मोदय स्कूलको रजत जयन्ति समारोहमा पहिलो पटक रगंमञ्चमा खुट्टा टेके, त्यो पनि भित्र होइन, बाहिर। बाहिर बसेर मैले कुकुरको क्यारिकेचर गरें। त्यो बापत मैले प्रमाणपत्र पाएँ। त्यो पाएँ पछि म भित्र आत्मविश्वास बढेर आयो। मलाई लाग्यो, 'यो चिज गर्दा त प्रमाणपत्र पाइने रहेछ, यसरी गर्न सकिने रहेछ' भन्ने थाहा पाएँ। त्यो भन्दा पहिले यी चिज साथीहरूको अगाडी मात्र गर्थे।
मैले गोल्डमेडल जिते, ९ हजार रूपैयाँ पनि पाएँ। आजको मितिमा त्यो पैसा ९ लाख बराबर हो। त्यति पैसा पनि पाएपछि मलाई 'ओहो! यो काममा त पैसा पनि पाइने रहेछ। मैले राजालाई कार्यक्रम देखाएँ भनेर रवाफ पनि मनमा भयो। गोरखापत्रमा फोटो निस्कियो, दुर्गानाथ शर्माले यो मान्छे राम्रो भनेर कमेन्ट पनि लेख्दिनुभयो।' त्यसपछि अझ मेहेनत गर्नुपर्छ भन्ने भयो। त्यसपछि अर्को प्रोगार्म बनाए, फेरि अर्को प्रोग्राम बनाएँ। परिवार नियोजनले आयोजना गरेको नाटकमा म दोस्रो भए, गोपालराज मैनाली प्रथम हुनुभयो।
पछि मदनदाइसँगको सहकार्यमा 'यमलोक' भन्ने क्यासेट निस्कियो बजारमा । त्यो बेलामा एउटा क्यासेटमा ९ रूपयाँ रोयल्टी पाइन्थ्यो। हामीले डेढ लाख प्रति क्यासेट बिक्रि गर्यो। त्यो पैसा मैले र मदन दाइले बाढ्यौं। त्यही पैसाले घरघडेरी जोड्यौ। त्यसपछि मैले यही नै मेरो पेसा हो भनेर यही पेसामा लागे। बैकको जागिर छोडे। मदन दाइ र मैले सहकार्य गरेको आउने वैशाखबाट ३८ वर्ष पुरा भएर ३९ वर्ष लाग्छ।
जब बलिदान' फिल्म खेले। त्यसपछि यादव खरेलजीले मलाई 'लोभीपापी' फिल्मका लागि पत्याउनुभयो। त्यसमा सिचुयसन ह्यूमर थियो। त्यो फिल्म वासु शशीजीले एक लाइनमा तिमीहरूलाई फिल्म बनाउन काम लाग्छ मैले यस्तो सोचेको छु भनेर सुनाउनुभएको थियो। एउटा मान्छे र पैसा बच्छ अरू सबै मर्छन, ल फिल्म बनाउ भनेर सुनाएपछि मैले मनमनै त्यसको कथा बुनेको थिएँ। खरेलजीलाई सुनाए उहाँ बनाउन तयार हुनुभयो। त्यो बनाएपनि हाम्रा लागि रंगमञ्च नै संसार थियो।
फिल्मको हिरोमा पत्याउँदैनथे। रंगमञ्चमा त हामी 'हिरो' नै भएर हिडिरहेका थियौं। पैसा पनि राम्रै आइरहेको थियो, संसार घुमिरहेका थियौं, फिल्ममा आउनुपर्ने जरूरी नै भएन। हुन त कलाकारिता नै हो, दर्शकहरूले हाम्रा टेलिश्रृखंलालाई अत्याधिक मनपराइरहनु भएको थियो। त्यो क्रेजले हामीले टेलिभिजन छोड्न नै सकेनौं।
मदन दाइको क्यारेक्टर मदन दाइलाई नै सुहाउँछ। मैले गरेको मलाई नै। मलाई कहिल्यै गरौं पनि लागेन। मदन बहादुरमा धेरै राम्रो गर्नुभएको छ। 'वनपाले'को, 'रात'को उहाँले रंगमञ्चमा गरेका भूमिकाहरू असाध्यै मनपर्छ।
मेरो ह्यूमर, सिरियसको इमेज पनि भयो, मलाई मेरो उमेर सुहाउँदो ह्यूमर भन्दा टाढा रहेको नकारात्मक भूमिका भएको स्क्रिप्टमा काम गर्न मन छ। 'शत्रु गते'मा रमेश रञ्जन झाले गर्नुभएको भूमिका गर्न चाहन्थे, चेन्ज देखिन्छ की भनेर तर प्रदीप भट्टराईले दाईले यही खेल्नुस भनेर दिनुभएन।
सबै लाग्छ। '१५ गते' लाग्छ। त्यसमा गरेको भूमिका अहिले त मेरो उमेरले दिन्न तर फिल्म बनाएको भए सुपरफिचर फिल्म हुन्थे।
लाग्छ। त्यो बेलामा तिनीहरूलाई मानिसहरूले फिल्म दर्जा दिदैन थिए। 'लालपूर्जा', 'वनपाले', 'चिरञ्जिबी'को कथालाई 'ए सानो पर्दा'को भन्थे। अनि फिल्म भनेको पाँच वटा फाइट गीत भको हुन्थ्यो। हामीले सिरियलका रूपमा बनाएका 'लालपूर्जा', '१५ गते' जस्ता कथामा अहिले फिल्म बनाउने ट्रेन्ड सुरू हुन थालेको छ। हामीले त्यो ३५ वर्ष अगाडी नै गरिरहेका थियौं। त्यसमा खुशी लाग्छ।
खै! आफूले आफूलाई के 'जज' गर्नु? म एउटा राम्रो क्यारेक्टर आर्टिस्ट हूँ। (हाँस्दै) म 'क' श्रेणीको एक्टर हो। आफूले आफूलाई किन थोरै मूल्याकंन गर्नु?
प्रकाशित मिति: आईतबार, चैत ११, २०७४, ००:३३:१९